15 ruux oo lagu qabtay howlgal ka dhacay Magaalada Baledweyne | Baydhabo Online
15 ruux oo lagu qabtay howlgal ka dhacay Magaalada Baledweyne
Ciidamada Dowladda Federalka Somaliya ee Magaalada Baledweyne ka howlgala ayaa sameeyay howlgal ay ku xaqiijinayeen ammaanka Magaaladaasi, xilli shalay galab Baledweyne lagu toogtay Askari ka tirsanaa ciidamada Dowladda.
Ciidamada Dowladda oo baadigoobaya raggii ka dambeeyay dilka Askarigaasi ayaa xalay waxa ay howlgal amni xaqiijin ah ka sameeyeen Xaafada Buundo weyn oo ah goobtii lagu dilay Askariga, waxayna halkaasi ka xireen tiro dhalinyaro ah.
Waxaa la sheegay ciidamada inay qabteen ilaa 15 dhalinyaro ah, kuwaasi oo qaarkood lagu tuhmaayo inay wax ka maleegeen dilka loo geystay Askariga ka tirsanaa ciidamada Dowladda.
Booliska Magaalada Baledweyne ayaa sheegay 15-ka ruux ee ciidamada ammaanka ay xireen in lagu haayo Saldhiga Magaalada Baledweyne halkaasi oo baaritaano ay ku socdaan.
Saraakiisha Booliska waxa ay sheegeen dadkaasi oo xalay gacanta Booliska ku jiray saaka in lagu sameynaayo Baaritaanka ku aadan tuhunada la xiriira dilka loo geystay Askariga ka tirsan ciidamada Dowladda.
Inta badan xilliyada dilalka qorsheysan loo geysto ciidamada Dowladda ayaa fal celinta ay ka bixiyaan waxa ay tahay inay soo qab qabtaan dhalinyaro lagu tuhmaayo dilkaasi dhacay, xilli ay suuragal tahay kuwii dilka geystay inay aagaba ka baxsadeen kol hore.